Home Wararka Xildhibaanada dooran ee Puntland oo maanta ku wajahan Muqdisho
Xildhibaanada dooran ee Puntland oo maanta ku wajahan Muqdisho
Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ku metelaya Puntland oo ku sugan Garoowe ayaa maanta ku wajahan magaalada Muqdisho.
Xildhibaannada oo ay weheliyaan mas’uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa ku sii jeeda Muqdisho si ay uga qayb-galaan dhaarinta xubnaha labada aqal ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya.
Dhaarinta xildhibaannada ayaa loo qorsheeyay Khamiista berriya oo ku beegan 14 bisha April 2022 waxaana lagu wadaa in dhaarinta kadib xubnaha laga soo doorto Puntland ay dib ugu laabtaan Garoowe.
Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka Axmed Karaash iyo guddoomiye Cabdirashiid Abwaan ayaa xalay kulan saagooyin ah la yeeshay xildhibaannada labada aqal ee Baarlamanka ku matala Puntland.
Previous articleQoor Qoor oo lagu eedeeyay in uu caqabad ku yahay Dhaarinta Xildhibaanada Koofur Galbeed
Next articleWeerar lagu qaaday guri uu degan yahay masuul ka tirsan DG Jubbaland